Studying Abroad is One Thing; Settling Down Abroad is Another
Help & Support Internships & Volunteering University Upgrade Yourself
နိုင်ငံခြားမှာ ပညာလေ့လာသင်ယူတာနှင့် တိုင်းတစ်ပါးမှာ နေသားတကျနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့အရာ (၂) ခု
ယနေ့ခေတ်မှာ သတင်းအချက်အလက်တွေနှင့် စကော်လာရှစ်တွေကို ပိုမိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရလာနိုင်တဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်း နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ယူနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း တွေ ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက မိဘတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ သားသမီးပေါ်မှာ အချိ်န် တွေပိုပေးလာပြီးတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးတစ်ခုကို နိုင်ငံခြားရပ်မှာ သင်ယူလေ့လာဖို့အတွက် ခွင့်ပြုလာကြ တာ ပိုပိုများပြားလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘနှင့် ကျောင်းသားတွေဟာ တိုင်းတစ်ပါးမှာ နေထိုင်ရတာ ဘယ်လိုအခြေ အနေရှိမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုအများကြီးမလုပ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်သစ်မှာ အဆင်ပြေဖို့အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုကိုလည်း အနည်းအကျဉ်းဘဲလုပ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်တာနှင့် နေသားကျဖို့ ကြိုးစားရတာက မတူညီပါဘူး။ ၄ နှစ်လောက်နေထိုင်ရမယ့်နိုင်ငံသစ်တစ်ခုမှာ နေသားကျဖို့ဆိုတာက အလွန်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခု ပါ။ ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ် နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာလို အဆင်ပြေဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်လေးတွေကို အောက်မှာပေးထားပါတယ်ရှင်။
(၁) ကိုယ့်လူမျိုးရော၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုး ၂ မျိုးစလုံးနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ။
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတော်တော်များများက သူတို့နဲ့လူမျိုးချင်းတူတဲ့သူတွေကိုသာ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ပေါင်းသင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံက ဒေသခံကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံတကာကလာတဲ့ ကျောင်းသား တွေနှင့်ပါ ခင်မင်မှုတည်ဆောက်တာဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာပါ။ မတူညီတဲ့နေရာပေါင်းစုံကလူတွေနှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်ရတာဟာ နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ယူခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သလို ကိုယ်နဲ့မတူညီတဲ့လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံသစ်လေးတွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီအခွင့်အလမ်းလေး တွေကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ပါ။
(၂) နည်းပညာတွေနှင့် အကျွမ်းဝင်လာအောင်လုပ်ပါ။
စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အမေရိက၊ အင်္ဂလန်နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသား တွေ တော်တော်များများပညာသင်ယူကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ဟာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနှင့်ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။ မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မတူညီတဲ့လူမှုကွန်ရက်ကို သုံးကြသလို ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့် ဓာတ်ပုံဝေမျှတဲ့နည်းလမ်းတွေတောင် မတူကြပါဘူး။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေဟာ ကိုယ် နေထိုင်တဲ့နေရာရဲ့ ပုံစံနှင့် ရင်းနှီးမှုရှိလာဖို့အတွက် တစ်ဦးချင်းအလိုက် ကြိုးစားအားထုတ်မှုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်သစ်မှာ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ကူညီပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ် ပါတယ်။
၃။ ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားကို လေ့လာပါ။
ကောလိပ်တွေနှင့် တက္ကသိုလ်တွေမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သင်ကြားမှုအခြေခံဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုတာနှင့် စင်္ကာပူမှာဆိုရင် မန်ဒါရီယန် (Mandarin) / မလေးရှားမှာဆို Bahasa Melaxu လို ဒေသခံဘာသာ စကားကို လေ့လာတာများတာဟာ ပုံမှန်အရာလေးတွေပါ။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားမဟုတ်ဘဲ အများသုံးဘာသာစကားကိုလည်း ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ယောက်ယောက်နှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ ပိုပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စေပြီး ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားမပြောရရင် မပါဝင်နိုင်ငံလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အစီအစဉ်နေရာတစ်ချို့ မှာလည်း ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုကို တစ်ခုခုပြန်လည်ကူလုပ်ပေးတာဟာ အဲဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဂရုစိုက်ကြောင်း၊ ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းကိုပြတဲ့လက္ခဏာပါ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ အကြောင်း ကို ပိုပြီးသိရှိလာဖို့နှင့် ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာ့ ၀န်ထမ်းလုပ်ခြင်းဟာ နိုင်ငံတကာက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ အခြေအနေတွေကို ပိုပြီးနားလည်လာရန်သာမက ကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းတူတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပိုရပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့အဆက်တွေရရှိလာဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့၊ ကျောင်းမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်အနီးအနားမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခွင့်ကြုံလာရင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (Volunteer) လေးဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒါက တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံလေးဖြစ်ပါတယ်။
နိုငျငံခွားမှာ ပညာလလေ့ာသငျယူတာနှငျ့ တိုငျးတဈပါးမှာ နသေားတကနြထေိုငျခွငျးဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့အရာ (၂) ခု
ယနခေ့တျေမှာ သတငျးအခကျြအလကျတှနှေငျ့ စကျောလာရှဈတှကေို ပိုမိုလှယျလှယျကူကူနဲ့ ရလာနိုငျတဲ့ အတှကျ မွနျမာနိုငျငံမှ ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှအေတှကျလညျး နိုငျငံခွားမှာ ပညာသငျယူနိုငျမယျ့ အခှငျ့အလမျး တှေ ပိုမိုမြားပွားလာပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံက မိဘတျောတျောမြားမြားက သူတို့ရဲ့သားသမီးပျေါမှာ အခြိနျ တှပေိုပေးလာပွီးတော့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ပညာရေးတဈခုကို နိုငျငံခွားရပျမှာ သငျယူလလေ့ာဖို့အတှကျ ခှငျ့ပွုလာကွ တာ ပိုပိုမြားပွားလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိဘနှငျ့ ကြောငျးသားတှဟော တိုငျးတဈပါးမှာ နထေိုငျရတာ ဘယျလိုအခွေ အနရှေိမယျဆိုတာ ကွိုတငျခနျ့မှနျးမှုအမြားကွီးမလုပျသလို ပတျဝနျးကငျြသဈမှာ အဆငျပွဖေို့အတှကျ ကွိုတငျ ပွငျဆငျမှုကိုလညျး အနညျးအကဉျြးဘဲလုပျကွပါတယျ။ နိုငျငံခွားမှာ ပညာသငျတာနှငျ့ နသေားကဖြို့ ကွိုးစားရတာက မတူညီပါဘူး။ ၄ နှဈလောကျနထေိုငျရမယျ့နိုငျငံသဈတဈခုမှာ နသေားကဖြို့ဆိုတာက အလှနျအရေးပါတဲ့အရာတဈခု ပါ။ ဒါကွောငျ့မလို့ ကိုယျ နိုငျငံခွားမှာပညာသငျယူနတေဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့နိုငျငံတဈခုမှာလို အဆငျပွဖေို့အတှကျ ဘာတှလေုပျသငျ့သလဲဆိုတဲ့ အကွံပွုခကျြလေးတှကေို အောကျမှာပေးထားပါတယျရှငျ။
(၁) ကိုယျ့လူမြိုးရော၊ နိုငျငံခွားလူမြိုး ၂ မြိုးစလုံးနဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံပါ။
နိုငျငံတကာကြောငျးသားတျောတျောမြားမြားက သူတို့နဲ့လူမြိုးခငျြးတူတဲ့သူတှကေိုသာ သူငယျခငျြးအဖွဈ ပေါငျးသငျးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျနတေဲ့နိုငျငံက ဒသေခံကြောငျးသားတှေ နိုငျငံတကာကလာတဲ့ ကြောငျးသား တှနှေငျ့ပါ ခငျမငျမှုတညျဆောကျတာဟာ အလှနျအရေးကွီးတဲ့အရာပါ။ မတူညီတဲ့နရောပေါငျးစုံကလူတှနှေငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈရတာဟာ နိုငျငံခွားမှာပညာသငျယူခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတဈခုဖွဈသလို ကိုယျနဲ့မတူညီတဲ့လူတှနေဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံရတဲ့အတှကျ အတှအေ့ကွုံသဈလေးတှလေညျး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီအခှငျ့အလမျးလေး တှကေို အမိအရဆုပျကိုငျပါ။
(၂) နညျးပညာတှနှေငျ့ အကြှမျးဝငျလာအောငျလုပျပါ။
စင်ျကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုငျး၊ အမရေိက၊ အင်ျဂလနျနှငျ့ သွစတွေးလနြိုငျငံတှဟော မွနျမာနိုငျငံကကြောငျးသား တှေ တျောတျောမြားမြားပညာသငျယူကွတဲ့နရောတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီနိုငျငံတှမှောနထေိုငျတဲ့လူတှရေဲ့ နစေ့ဉျဘဝဟာ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာတှနှေငျ့ခြိတျဆကျနပေါတယျ။ မတူညီတဲ့နိုငျငံတှမှော မတူညီတဲ့လူမှုကှနျရကျကို သုံးကွသလို ငှပေေးခမြှေုစနဈနှငျ့ ဓာတျပုံဝမြှေတဲ့နညျးလမျးတှတေောငျ မတူကွပါဘူး။ နိုငျငံတကာကြောငျးသားတှဟော ကိုယျ နထေိုငျတဲ့နရောရဲ့ပုံစံနှငျ့ ရငျးနှီးမှုရှိလာဖို့အတှကျ တဈဦးခငျြးအလိုကျ ကွိုးစားအားထုတျမှုလုပျသငျ့ပါတယျ။ အဲဒါက နိုငျငံတကာကြောငျးသားတှအေတှကျ ပတျဝနျးကငျြသဈမှာ အဆငျပွစေဖေို့အတှကျ ကူညီပေးနိုငျတဲ့အရာတဈခု ဖွဈ ပါတယျ။
၃။ ဒသေဆိုငျရာဘာသာစကားကို လလေ့ာပါ။
ကောလိပျတှနှေငျ့ တက်ကသိုလျတှမှော အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို သငျကွားမှုအခွခေံဘာသာစကားအဖွဈ အသုံးပွုတာနှငျ့ စင်ျကာပူမှာဆိုရငျ မနျဒါရီယနျ (Mandarin) / မလေးရှားမှာဆို Bahasa Melaxu လို ဒသေခံဘာသာ စကားကို လလေ့ာတာမြားတာဟာ ပုံမှနျအရာလေးတှပေါ။ နိုငျငံတကာကြောငျးသားတှဟော အင်ျဂလိပျဘာသာ စကားမဟုတျဘဲ အမြားသုံးဘာသာစကားကိုလညျး ပွောနိုငျအောငျ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ တဈယောကျယောကျနှငျ့ပွောဆိုဆကျဆံရာမှာ ပိုပွီးအဆငျပွခြေောမှစေ့ပွေီး ဒသေဆိုငျရာဘာသာစကားမပွောရရငျ မပါဝငျနိုငျငံလူမှုအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့ အစီအစဉျနရောတဈခြို့မှာလညျး ပါဝငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အသိုငျးအဝိုငျးတဈခုကို တဈခုခုပွနျလညျကူလုပျပေးတာဟာ အဲဒီအသိုငျးအဝိုငျးကို ဂရုစိုကျကွောငျး၊ ခဈြမွတျနိုးကွောငျးကိုပွတဲ့လက်ခဏာပါ။ စတေနာ့ဝနျထမျးလုပျခွငျးဟာ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကလူတှရေဲ့အကွောငျး ကို ပိုပွီးသိရှိလာဖို့နှငျ့ ကောငျးမှနျတဲ့ကိစ်စတှမှော ပါဝငျနိုငျမယျ့နညျးလမျးကောငျးလေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ စတေနာ့ ဝနျထမျးလုပျခွငျးဟာ နိုငျငံတကာက ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှကေို နိုငျငံတဈခုရဲ့ အခွအေနတှေကေို ပိုပွီးနားလညျလာရနျသာမက ကိုယျနဲ့သဘောထားခငျြးတူတဲ့သူတှနေဲ့တှဆေုံ့နိုငျဖို့၊ သူငယျခငျြးမိတျဆှတှေပေိုရပွီး ကယျြပွနျ့တဲ့အဆကျတှရေရှိလာဖို့အတှကျ အရေးပါတဲ့အရာလေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့၊ ကြောငျးမှာဘဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့ရဲ့ အိမျအနီးအနားမှာဘဲဖွဈဖွဈ အခှငျ့ကွုံလာရငျ စတေနာ့ဝနျထမျး (Volunteer) လေးဝငျလုပျမယျဆိုရငျ အဲဒါက တကယျကောငျးမှနျတဲ့အကွံလေးဖွဈပါတယျ။
A lot of students in Myanmar now have more opportunities to study in international destinations due to the easier access to information and scholarships. It has become common foralot of parents here in our country to invest in their children and allow them to embark onabetter academic journey abroad. But both parents and students tend not to anticipatealot about how life’s going to be inanew country and make little preparation to get used to another environment. Apparently, studying abroad is one thing but trying to settle down there is another. Getting settled inanew country where you’ll be spending four years is very instrumental. Below areafew tips on how to feel at home while studying abroad.
Have friends of same and different nationalities
A lot of international students only seek friends of their own nationality, but it is important to buildanetwork that includes local classmates and other international students. Having friends from diverse backgrounds, is one of the advantages of studying abroad and gives you experience in communicating with people different from yourself - don’t miss out on this opportunity!
Singapore, Malaysia, Thailand, US, UK and Australia are some very common international study destinations for Myanmar students and all these countries have advanced technology integrated into their daily lives. People in different countries use different social media, different payment systems, different photo sharing applications. International student should makeaparticular effort to familiarize with local platforms. This can help international students adapt to new settings and communities.
It is normal for colleges and universities to employ English only as the primary language of instruction and seemingly make it redundant to learn an additional local language like Mandarin in Singapore or Bahasa Melayu in Malaysia. International students should make an attempt to speak the common tongue apart from English since it generally makes it easier for one to communicate easier, fit in better and even have access to parts of the community that couldn’t be reached out without speaking the language.
Giving back to the community isasign of caring and loving that community. Volunteering isagood way to get to know more aboutagroup of people and contribute toagood cause. It not only helps students to understand an international context better but it also allows them to mingle with like-minded people, make more friends and expand their network. So it always isagood idea to pitch in whenever there isavolunteering opportunity in your school or your neighbourhood.